Ambassador of Myanmar presents his Credentials to His Excellency Mr. Taur Matan Ruak, President of the Democractic Republic of Timor-Leste – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
U San Myint Oo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Democratic Republic of Timor-Leste, presented his Credentials to His Excellency Mr. Taur Matan Ruak, President of the Democractic Republic of Timor-Leste, on 17 February 2015 in Dili.
Dated. 1 March 2015
တီမောလက်စ်တေဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးစံမြင့်ဦးသည် ၎င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ဒီလီမြို့၌ တီမောလက်စ်တေ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံံံ သမ္မတ မစ္စတာ တော် မာတန် ရောက်ခ် ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်